१.७६ % ले घट्यो नेप्से, २० ओटा कम्पनीको शेयरमूल्यमा उच्च गिरावट – eSidhakura
मुख्य पृष्ठअर्थ/बाणिज्य अर्थनीति१.७६ % ले घट्यो नेप्से, २० ओटा कम्पनीको शेयरमूल्यमा उच्च गिरावट
काठमाडौं । दुई दिन सार्वजनिक बिदापछि खुलेको नेप्से मंगलवार १ दशमलव ७६ प्रतिशत घटेको छ । यो दिन गत बिहीवारको तुलनामा नेप्से परिसूचक ५६ दशमलव शून्य ३ अंकले घटेर ३ हजार १२४ दशमलव ८७ विन्दुमा झरेको हो ।
३ हजार १८६ दशमलव ४७ विन्दुदेखि खुलेको मंगलवारको बजार निरन्तर घटेर बन्द भएको हो । नेप्से परिसूचकसँगै यो दिन सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि २ दशमलव १७ प्रतिशत घटेको छ । १२ दशमलव ८१ अंकले घटेर सेन्सेटिभ इन्डेक्स ५७७ दशमलव ६६ विन्दुमा झरेको हो ।
दोहोरो उच्च अंकले घटेको बजारमा रू. १६ अर्ब १२ करोड ४४ लाख ६८ हजार बराबरको २ करोड ५३ लाख १६ हजार ८०५ कित्ता शेयर कारोबार भएको छ । यो कारोबार २२५ ओटा कम्पनीको १ लाख ५६ हजार ९१३ पटकको व्यापारमा भएको हो ।
यस दिन अरुणभ्याली हाइड्रोपावरको सर्वाधिक रकमको शेयर कारोबार भएको छ । कम्पनीको रू. ७५ करोड ४३ लाख ३३ हजार बराबरको ११ लाख २१ हजार २११ कित्ता शेयर कारोबार भएको हो । सर्वाधिक रकमको शेयर कारोबार भएको कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. २७ ले घटेर रू. ६७० कायम भएको छ ।
मंगलवार वित्त र निर्जीवन बीमा समूह बाहेकका सबै समूहगत परिसूचक घटेका छन् । वित्त समूहको १ दशमलव ४७ प्रतिशत र निर्जीवन बीमा समूहको शून्य दशमलव ७६ प्रतिशत परिसूचक बढेको छ । यो दिन जलविद्युत् समूहको परिसूचक सर्वाधिक ६ दशमलव २१ प्रतिशतले घटेको छ ।
जलविद्युतसँगै लगानी समूहको ४ दशमलव ४३ प्रतिशत, विकास बैंकको ३ दशमलव ९८ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधनको २ दशमलव ११ प्रतिशत, व्यापारिक समूहको १ दशमलव ६२ प्रतिशत, अन्यको १ दशमलव ४४ प्रतिशत, होटल्स तथा पर्यटनको शून्य दशमलव ४७ प्रतिशत, लघुवित्तको शून्य दशमलव ५३ प्रतिशत, जीवन बीमाको शून्य दशमलव ७९ प्रतिशत र म्युचुअल फण्डको शून्य दशमलव शून्य ५ प्रतिशत परिसूचक घटेको छ ।
यस दिन आइसीएफसी फाइनान्सको सर्वाधिक शेयर खरीद चाप रहेको थियो । दिउँसो २ बजेर ५९ मिनेटसम्मको कारोबार अवधिसम्म आइसीएफसी फाइनान्सको १४ लाख ९६ हजार ७५८ कित्ता शेयर खरीद माग थियो । सर्वाधिक खरीद माग रहेको उक्त कम्पनीको शेयरमूल्य १० प्रतिशतले बढेको छ ।
कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. १२८ दशमलव २० ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. १ हजार ४१० दशमलव २० पुगेको छ । निरन्तर उच्च दरमा मूल्य बढ्दै आएको जीवन विकास लघुवित्तको शेयरमूल्य पनि बुधवार १० प्रतिशतले बढेको छ । जीवन विकास लघुवित्तको प्रतिकित्ता रू. ३९० दशमलव ६० ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. ४ हजार २९६ दशमलव ७० कायम भएको हो ।
यस दिन २० कम्पनीको शेयरमूल्यमा उच्च गिरावट आएको छ । नेशनल हाइड्रोपावर, एचआईडिसिएल, खानीखोला हाइड्रोपावर, दिव्यश्वरी हाइड्रोपावर, सिनर्जी पावर, नेपाल हाइड्रो डेभलोपर, कालिका पावर, आँखुखोला जलविद्युत, जोशी हाइड्रोपावर, घलेम्दी हाइड्रो, युनिभर्सल पावर, युनियन हाइड्रोपावर , शिवश्री हाइड्रोपाव र रू रू जलविद्युतको परियोजनाको शेयरमूल्य १० प्रतिशतले घटेको छ ।
त्यस्तै पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावरको ९ दशमलव ९९ प्रतिशत, हिमालयन पावर पार्टनरको ९ दशमलव ९९ प्रतिशत, लिवर्टी ईनजीको ९ दशमलव ९२ प्रतिशत, माउण्टेन हाइड्रो नेपालको ९ दशमलव ८६ प्रतिशत, हिमालयन उर्जा विकास कम्पनीको ९ दशमलव ५१ प्रतिशत र युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावरको ९ दशमलव शून्य ७ प्रतिशत शेयरमूल्य घटेको छ ।